” ကပ်ဖား” နောက်ဆက်တွဲ (၃) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ” ကပ်ဖား” နောက်ဆက်တွဲ (၃)
” ကပ်ဖား” နောက်ဆက်တွဲ (၃)
- ဂဂျီဂဂျောင် ပျိုတို့မောင်
Posted by ဂဂျီဂဂျောင် ပျိုတို့မောင် on Feb 22, 2011 in News |9comments
ကပ်ဖား (ခေါ်) လူလိမ် (ခေါ်) လူယုတ်မာ (ခေါ်) ထွန်းသန့်ကျော် (ခေါ်)ကျော်ကျော် ဖြစ်ပါသည်ရှင့်၊
ယ္ခု ကျော်ကျော်၏ဒုက္ခပေးမှုကြောင့်သံတွဲမြို့သူမြို့သား ၃၀၀၀၀(သုံးသောင်း) ခန့်
သော ခရိုင်လ.ဝ.က မှုးဦးကိုကိုမောင်သည် ၎င်းကျော်ကျော်နှင့်မိတ်ဆွေဖွဲ့၍ ခရီး
သွားလာခွင့်(ဗီစာ) အတွက်လာဘ်ငွေ များစွာတောင်းခံယူကာ လူအများဒုက္ခရောက်
အောင်ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေပါသည်ရှင့်၊ ယ္ခင်၁၅၀၀၀/၂၀၀၀၀ ပေးပြီးသွားလာနေကြသူ
များအားသွားလာခွင့်ပိတ်ပင်၍ ၄၀၀၀၀/၅၀၀၀၀ ကျပ် ပေးမှသာဗီစာ ထုတ်ပေးနေ
နာမကျန်းဖြစ်ပါက ငွေမတတ်နိုင်ပါသောကြောင့် အသက်ပင်အသေခံရမည့်အခြေနေ
ဆိုးများဖြစ်ပေါ်နေပါသည်ရှင့်၊ ၎င်းကျော်ကျော်ဆိုသူကလည်း ယ္ခုရဲချုပ်ကြီးအသစ်မှာ ရင်းနှီးခင်မင်သောမိတ်
ဆွေဖြစ်ကြောင်း သံတွဲမြို့အာဏာပိုင်များမှာလည်းသူပြောသလိုဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ
ပါတီတွင်လည်း ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မည်သေချာကြောင်း၊ စစ်တွေမှပါတီလူကြီးများကို
လာဘ်ငွေများစွာလာဘ်ထိုးခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိ မ.ထ.သ ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုလည်းဆက်
လက်ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြွားဝါ၍ လ.ဝ.က မှုး ကို ကပ်ဖားလုပ်ပြီး ရရှိလာသော
တန်စိုးလာဘ်ငွေများကိုခွဲဝေယူလျှက်ရှိနေပါသည်ရှင့်၊ ယ္ခင်ကတိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း အထက်မှအရေးယူစစ်ဆေးခြင်းမပြုလုပ်သေးသဖြင့်
နားမလည်နိုင်ဖြစ်ရပါသည်ရှင့်၊ လ.ဝ.က မှုးဦးကိုကိုမောင်ကလည်း ကျော်ကျော် ၏
အားကိုးဖြင့် ဗီစာ မပေးသည့်ပြင် မင်းတို့ကို ဖမ်းချုပ်ထောင်ချ၍ရကြောင်း ခြိမ်းခြောက်
မရှက်မကြောက်ဝန်ခံရသော် ကျွန်မသည်လည်း ၎င်းလူယုတ်မာ ၏ သွေးဆောင်ဖျက်ဆီးခြင်းခံရသော မိန်းကလေးများထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်ရှင့်၊
online မိတ်ဆွေများ သက်ဆိုင်ရာသတင်းဋ္ဌာနများသို့ ဆက်လက်ဖြန့်ဝေ ပေးကြ
ပါရန် အသနားခံအကူအညီတောင်းခံအပ်ပါတယ်ရှင့် ။
About ဂဂျီဂဂျောင် ပျိုတို့မောင်
View all posts by ဂဂျီဂဂျောင် ပျိုတို့မောင် →
ဟာဗျာ ဒီကောင်ဗျာ အရင်သတင်းဖတ်လိုက်ရပါတယ် လူမှဟုတ်ရဲ့လား
မြို့က အကောင်ကြီးတွေ ဘာလုပ်နေကြတာလဲ
စိတ်ဆိုးတယ်ဗျာ အဲဒီကောင်ကို ဘာကြောင့်ဒီလောက်ထိ စောင့်ကြည့်နေကြတာတုန်း
အဲဒီကောင်ဓါတ်ပုံရရင်တင်ပေးဗျာ ဒီဘက်ရောက်လာခဲ့ရင် တောက် တွေ့ချင်စမ်းတယ်
အားမငယ်ပါနဲ့ညီမလေးရေ သူ့အလှည့်ကျ သိရပေမပေါ့
ကဲ ရွာသားတို့ရေ ထပ်ဆင့်အကူညီတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ သတင်းလေးဖြန့်ဝေပေးကြပါလို့
ကျုပ်တို့မွေးရပ်မြေကမဆွေးမြေ့ဘဲ ရှင်သန်နေတဲ့ ဟိုမသာကောင် ထွန်းသန့်ကျော်မိတ်ဆိုးကြီးပါလား…….
ရွာသားတို့ရေ..ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ သတင်းဋ္ဌာန အားလုံးထည့်ပေးကြရအောင်လားခင်ဗျာ…..
ညီမငယ်လေးလဲ အားတင်းထားပါ ..ရတဲ့သတင်းလဲတင်ပေးပါနော်……အားလုံးကူညီကြမှာပါ
မှတ်မိပီဗျို့ … မှတ်ပုံတင်အတုကိုင်တာရယ် .. ပါတီလူကြီးဖြစ်တာရယ် .. အာဏာပိုင်တွေကိုဖားယားပီး။….
အောက်ခြေလူတန်စားတွေကို ဖမ်းချုပ်ထောင်ချ တဲ့ အကောင်မဟုတ်လား … အံ့သြတယ်…ငါတို့ဘက်မှာဆိုရင်…
သူကြီးခင်ဗျား————— ဟောဒီကမိန်းကလေးရဲ့ဒုတ်ခက တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးပါနော်—————။
သူကြီးရေ ဇစ်ပိုပြောနေတယ် … စောင်မကြည့်ရူပါတဲ့ .. ။
ကျေးဇူးပါ ကူညီပေးတဲ့ကျေးဇူးဘယ်တော့မှမမေ့ပါနော် ၊ ရှင်တို့ကိုယ်တွေ့မကြုံဘူးကြလို့ပါ ၊ ဘယ်ကလူကြီးလာ
လာ အတင်းဆွေမျိုးစပ်တော့တာပါဘဲရှင် ကပ်ပီးဖားမယ် အတင်းမိတ်ဆက်မယ၊် ထင်ပါတယ် သေပီးရင်တောင်
ဖားကပ်ဖြစ်မဲ့လူမျိုးပါ၊ အဲဒီလူယုတ်မာရဲ့ဓါတ်ပုံကိုလဲ နောက်တစ်ခေါက်တင်ပေးပါ့မယ်ရှင့်၊
အေးဗျာ ဆက်စပ်မှုရှာပီးမေးကြည့်မိပါတယ်၊ တစ်မြို့လုံးကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတဲ့ဗျာ
လူတွေကိုလဲစိတ်ဆိုးသလိုခံစားမိတယ်၊ အများနဲ့တစ်ယောက် ထိုင်ပီးကြည့်နေကြတယ်လေ
တံတွေးနဲ့ထွေးမယ်ဆိုရင်တောင် သေနိုင်လောက်ပါတယ်၊ ဘာကြောင့်ခေါင်းကြီးတွေငုံ့ပီးခံနေကြတာလဲဗျာ၊
အား..ဟုတ်ကဲ့ဗျ… …သံတွဲမှာ မ.ထ.သ ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ယောက်သက်တမ်း၂ နှစ် သာလျှင်လုပ်ခွင့်ရှိကြောင်း ကြားသိရပါတယ်ခင်ဗျ…. ဒါပေမဲ့ ခုဇတ်မိုက်ကြီး ကျော်ကျော် ကတော့ အဖွဲ့ဝင်များကို အတင်းစည်းရုံး ခြောက်လှန့် သွေးဆောင် အောင်ပွဲခံ သိမ်းပိုက်သွားကြောင်းပါ.. သူကတော့ ယ္ခု ဆို လျှင် ၃နှစ်ဆက်တိုက်ီရာထူးရယူနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်…ပိုဆိုးတာက မြို့အာဏာပိုင်များလည်း ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းလဲမတွေ့ရဘူးခင်ဗျ… အဲဒီလူကြီးတွေကို ကပ်ဖားယပ်ဖား ၊ လာဘ်ငွေထိုးမှု.. လုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာသလောက်ပါ…. သူ့အပြောက…… ဘယ်ကောင်မှ ငါ့ ကိုမစစ်ရဲဘူး ၊ စစ်တဲ့သူကိုပါတီဋ္ဌာနချုပ်ကိုလမ်းကြောင်းခင်း၊ဇတ်လမ်းဆင်တိုင်မယ် တဲ့…
ဒီလူကလဲအတိုင်အတော တကယ်ထူတဲ့သူမို့ မြို့သားတွေလဲ ကြောက်လဲကြောက်၊ ရွံ လဲ ရွံ ဖြစ်နေ ကြောင်းလဲသိရပါတယ်ခင်ဗျ …. ဒါပေမဲ့ သတင်းကောင်းတစ်ခု ကြားရပါတယ် ..မြို့သူ မြို့သား နယ်သူ နယ်သားများစုပေါင်းပြီး ရဲအောင်လံကားဂိတ်ကို သပိတ်မှောက်ကြတော့မဲ့သတင်းဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျ…
လူကိုမြင်ဘူးချင်တယ်ဗျာ…တစ်ယောက်ယောက် ကပ်ဖားလူယုတ်မာ ကြီးရဲ့ ဓါတ်ပုံ တင်ပေးပါ အမြန်လုပ်ကြပါဗျာ.. မြို့မှာလဲ ရဲ ကအစ ဋ္ဌာနပိုင်းဆိုင်ရာ လူကြီးအားလုံးကို သူ့ ခါးပိုက် ထဲထည့်ထား လေ တော့ ဘာမှကိုလုပ်မရ ဖြစ်နေကြပုံပါ …..တော်တော်ခက်နေပါပြီရွာသားတို့ရေ………။